Lavanila ao Andapa Hovidiana 900.000 ariary ny kilao
Mankasitraka ny dingana ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fandraisana andraikitra amin’ny fanatsarana ny vidin’ny lavanila any an-toerana ny vahoakan’ny disitrikan’Andapa, faritra SAVA,
raha ny fanazavan’ny depiote voafidy tao an-toerana. Raha ny zava-misy dia nidina hatramin’ny 400.000 ariary ny kilao. Maro ny tantsaha sy mpandraharaha maty antoka vokatr’izany. Niezaka nidina tany an-toerana ny minisitry ny varotra ary nihaona tamin’ireo mpandraharaha. Tapaka fa hotazomina 900.000 ariary na 4.500.000 fmg ny vidiny farany ambany ary tsy ferana ny vidiny ambony, hoy hatrany ny fanazavan’ny depiote Jean Rabenary na depiote Thierry. Zava-doza ihany koa ny haratsian-dalana any kanefa kaominina maro no ahitana io vokatra io. Miisa 21 ny kaominina ao an-toerana.